Rubber Products Vulcanizing Tank - China Qingdao rakadzikama Machinery
Zvomumagaba Food Processing Autoclave dzinodzikinyidza Sterilizer M ...
Product Application Rubber zvigadzirwa vulcanizing tangi dzinowanzotsigi- kushandiswa okurapa inogadziriswa rabha zvinogadzirwa vulcanization. The rabha zvinogona kuva rabha wire, rabha shangu, rabha hosipaipi, rabha chinotenderera, namira tepi, bhanhire rabha, rabha mvura chimiso, rabha bhora, rabha lining, akwegura tai retread, adzikinura rabha desulphurization uye SBR thermoplastic nebwe; Anti ngura, Anti deformation impregnation kurapwa, zvokudya uye zvetsika Chinese mushonga kubvisa (kubaya) utachiona, rushava, mangwanani, Soc ...
FOB Price: US $ 7000-40000
Supply Mano: 10 Sets pamwedzi
Rabha zvinogadzirwa vulcanizing tangi dzinowanzotsigi- kushandiswa okurapa inogadziriswa rabha zvinogadzirwa vulcanization. The rabha zvinogona kuva rabha wire, rabha shangu, rabha hosipaipi, rabha chinotenderera, namira tepi, bhanhire rabha, rabha mvura chimiso, rabha bhora, rabha lining, akwegura tai retread, adzikinura rabha desulphurization uye SBR thermoplastic nebwe; Anti ngura, Anti deformation impregnation kurapwa, zvokudya uye zvetsika Chinese mushonga kubvisa (kubaya) utachiona, rushava, mangwanani, masokisi kupisa pfungwa, yechibairo angled uye mapfupa mukuru-kumanikidzwa nadzurudzo, degreasing, hydrolysis minhenga siyana, aruminiyamu zvinogadzirwa oxidation. Also kushandiswa kabhoni zvinhu, asbestos kukweshera zvinhu, gypsum uye zvaro, uye nezvimwe zvinhu autoclave, kubika, kutiva, nokuomesa. Chikamu chechipiri magadzirirwo pfungwa rabha chubhu vulcanizing tangi. 1, The rabha vulcanizer hwevanhu! (Kwose unyanzvi, tichiratidza vanhu vaifarira kugadzira) 2, kuchengeteka! (Maererano: GB150-2011 "kumanikidzwa mudziyo kugadzira mitemo", ISO9001: 2008 yepamusoro advertising hurongwa, HACCP zvokudya hazvikuvadzi advertising design, gadzira) 3, The rabha vulcanizer kwakavimbika! (Selection wenyika-mbiri muchiso zvikamu,) 4, The rabha vulcanizer ndiye simba kuponesa! (Temperature kurasikirwa, magetsi, compressed mhepo, nguva kunwa zvina musoro, pamwe Optimization) 5, Rubber Vulcanizer ndiye chitarisiko, yokufungidzira, chiine, nyore! The chetatu rabha chubhu vulcanizing tangi design, kugadzira hwaro Products zvichinyatso enderana ne "vachikwanisa mitemo" uye GB150-98, GB151-98 National mwero kugadzira kugamuchirwa, garandi ruzivo uye michina mapepa kuvimbika.
Technical parameters kuti rabha chubhu vulcanizing tangi.
arapa tangi dhayamita / chubhu urefu / zvizere vachikwanisa 1500 mm / 3000mm / 5.3m3
Design kumanikidzwa 1.0Mpa
The kunonyanyisa anoshanda nevamwe 0.8Mpa
The kunonyanyisa uchishandisa tembiricha kuti 180 ℃
Total akagadza simba pamusoro 64KW
Power wedzerai voltage 380V
Pot muviri zvinhu Q345
Wall ukobvu of tangi muviri 12mm
Weight vanenge 3 matani
Section 6 Kurapwa tangi ancillary zvivako (mushandisi-anazvo)
Air compressor nedzinovengwa: 0.6m3 / Maminitsi
Chikamu 7: Zvinoitwa vulcanization tangi
◆ magetsi otomatiki kudzora ,
◆ zvemagetsi, zvemaziso kaviri pamusoro-voltage kudzivirirwa.
◆ zvokuimba kuchengeteka cheni.
◆ zvemagetsi tembiricha kutsauka kururamiswa.
◆ zvemagetsi pamusoro-tembiricha kudzivirirwa zvokuzvisarudzira.
◆ tembiricha anomaly aramu.
◆ zvemagetsi kuonana nevezera kuzvidzora
◆ otomatiki hwemvura sando silencer.
◆ tembiricha musiyano pakati pfungwa poto (kupisa kuparadzirwa) ± 0.5 ℃.
◆ Intelligent tembiricha kuzvidzora, tembiricha kudzora yakarurama mukati ± 0.5 ℃.
Rabha zvigadzirwa, akadai rabha, vulcanization, adzikinura rabha desulfurization, SBR thermoplastic chikweshe; yemishenjere carbonization degreasing, rabha, rabha, rabha, rabha, Wood moto, zvipfukuto, Anti ngura, Anti deformation impregnation, zvokudya uye proprietary Chinese mushonga kure (kubaya) utachiona.
Previous: Stainless Steel Food Industrial Cooking Pot
Next: Wood Timber Anticorrosive Treatment Tank
autoclave muchina rabha Kurapwa mukamuri
Carbonization Autoclave Wood Andisepitiki Tank
inopisa mvura Kubika tangi
rabha autoclave vulcanizer
rabha Kurapwa autoclave
rabha Kurapwa anogona
rabha Kurapwa tangi
rabha Kurapwa tangi Machine
rabha hosipaipi Kurapwa mudziyo
rabha vulcanization autoclave
rabha vulcanizing anogona
rabha vulcanizing tangi
mapuranga anticorrosive tangi
mapuranga yokubikira tangi
mapuranga impregnation tangi
mapuranga nadzurudzo tangi
timber treatment tangi
huni anticorrosive tangi
huni kubika tangi
huni impregnation tangi
huni nadzurudzo tangi
danda kurapwa tangi
Michero Vegetables Washing Processing Machine ...